GND: ထိုအတိုကောက်များ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
GND- ဤအတိုကောက်များအကြောင်း သိလိုသမျှ
ဣဇာက်သည် | 19/11/2021 08:38 | အဆင့်မြှင့်တင် 22/11/2021 11:36 | ယေဘုယျ
GND, မြေပြင်, မြေပြင် ... အဲဒီအသုံးအနှုန်းတွေက ဘာကိုအတိအကျရည်ညွှန်းတာလဲ။ ၎င်းတို့သည် အဓိပ္ပါယ်တူများလား သို့မဟုတ် ကွဲပြားမှုများရှိပါသလား။ အီလက်ထရွန်းနစ်လောကကို ပထမဆုံးအကြိမ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဒီသံသယတွေအားလုံးက မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းများဒါပေမယ့် သူတို့မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ၎င်းတို့သည် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဆားကစ်တစ်ခုအတွက် ဘာအတွက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့၏ အရေးပါမှု၊ နှင့် အသုံးအနှုန်းများအကြား ကွဲလွဲမှုများ ရှိ/မရှိကို ကောင်းစွာနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ terminals တွေကို ဘာကြောင့် ဒီ connector နဲ့ ချိတ်ဆက်သင့်တာလဲ။ arduino ဘုတ်အဖွဲ့, etc
1 Ground = မြေပြင် = GND?
1.1 အီလက်ထရွန်နစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် GND သို့မဟုတ် မြေပြင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1.2 စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် ဒြပ်ထုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
2 မြေပြင်အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် GND
3 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းတွေကော ဘယ်လိုလဲ။
Ground = မြေပြင် = GND?
တူညီသောအရာကို ရည်ညွှန်းရန် ဝေါဟာရများစွာရှိရုံသာမက တူညီသော သင်္ကေတအမျိုးအစားများစွာကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ အလွန် GND၊ မြေအဖြစ်၊ ကြားနေ terminal၊ မြေအဖြစ်လူများစွာက ၎င်းတို့ကို အဓိပ္ပါယ်တူတူ အသုံးပြုကြသော်လည်း အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာများကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်-
အီလက်ထရွန်နစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် GND သို့မဟုတ် မြေပြင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
GND သည် Ground ၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဆားကစ်များတွင်၊ လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်သို့ လျှပ်စီးကြောင်း၏ ဘုံပြန်လမ်းကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ထို့ကြောင့် ဆားကစ်ကို အပြီးသတ်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကို ၎င်း၏အဆင့်၊ ကြားနေနှင့် မြေပြင်၊ အပြုသဘော၊ အနှုတ်နှင့် မြေပြင်ဝင်ရိုးစွန်းများရှိသည့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးပတ်လမ်းများတွင် ၎င်းကို အစားထိုးလက်ရှိစနစ်များတွင် နှစ်မျိုးလုံးတွေ့နိုင်သည်။
ဗို့အားများကိုတိုင်းတာရန် ဆားကစ်တစ်ခုရှိ ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ်လည်း ရှုမြင်နိုင်သည်၊ မြေပြင်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု. ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ပတ်လမ်းအတွင်း ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းအချို့ သို့မဟုတ် လေထုဇစ်မြစ် (လျှပ်စီးကြောင်း) ထွက်လာပါက၊ ပျက်စီးနေသောစွမ်းအင်သည် မြေကြီးဆီသို့ စီးဆင်းနိုင်ပြီး ၎င်းကို မပျက်စီးစေရန် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားစေရန် ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ။
စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် ဒြပ်ထုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
မကြာခဏ ဝေါဟာရအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း သတိထားရန်လိုသည်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အရာများနှင့် ကွဲပြားတတ်သည်။ သတ္တုအိမ် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပုံပါရှိသော စက်ပစ္စည်းအများအပြားတွင်၊ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကို မြေကြီးချိတ်ဆက်မှုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ကေဘယ်ကြိုးကို များသောအားဖြင့် အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ အနိမ့် impedance လမ်းကြောင်း လျှပ်ကာပြဿနာရှိသောအခါတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဤလမ်းကြောင်းမှတဆင့် စီးဆင်းသွားပြီး လိုအပ်သောအကာအကွယ်များ (fuses၊ thermals, ...) ကို အသက်ဝင်စေသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ထိသောအခါတွင် အသုံးပြုသူများ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြေပြင်အမျိုးအစားများ သို့မဟုတ် GND
အတော်ကြာ ပုံစံ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများအကြောင်းပြောသောအခါ GND သို့မဟုတ် မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှု။
ရူပမြေ: ၎င်းသည် ထိုအန္တရာယ်ရှိသော ဗို့အားများကို သယ်ဆောင်ရန်အတွက် မြေကြီးဝိုင်ယာကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကြေးနီတံကို မောင်းနှင်သည့် မြေကြီးမျက်နှာပြင်၏ အလားအလာကို ရည်ညွှန်းသည်။ အသုံးပြုသူများသည် မြေပြင်ပေါ် လှမ်းတက်သောအခါ မြေကြီးနှင့် တူညီသောကြောင့် လူများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အယူအဆတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများသည် တူညီသောအလားအလာရှိပါက၊ အလားအလာရှိသော လဲလှယ်မှုမျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုရှိလာမည်မဟုတ်ပါ။
လက်တံမြေ: ၎င်းသည် မြေကြီး၏ ဂန္တဝင်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို Ground နှင့် အတိုကောက် GND မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည်0ဗို့ရှိ အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်လမ်းရှိ ရည်ညွှန်းအမှတ်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ သင်ဆဲဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုပြီးရှုပ်ထွေး… ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဆားကစ်တစ်ခုတွင် GND သို့မဟုတ် classical ground နှင့် ground (ကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် casing) တို့ကိုလည်း မြေနှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဟု မှတ်သားထားပါ။ သို့သော်၊ မြေပြင်နှင့်မြေပြင်သည် ဆားကစ်တစ်ခုတွင် တူညီသောဗို့အားမရှိသည့် အချို့ကိစ္စများတွင်ရှိပြီး Buck converters ကဲ့သို့ လှိုင်းပုံစံသည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းတွေကော ဘယ်လိုလဲ။
သင်မြင်ဖူးသည့်အတိုင်း၊ များစွာသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများတွင် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော terminals များပါရှိသည်။ GND. ဤ terminal များကို ၎င်းတို့ထားရှိမည့် circuit အတွင်းရှိ မြေကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့ အလုပ်မလုပ်ဘဲ သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် pinout ကိုသိရန်နှင့်မှန်ကန်သောချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန်ထုတ်လုပ်သူ၏ဒေတာစာရွက်များကိုဖတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာကိစ္စတွင်၊ မူအားဖြင့် ပရောဂျက်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော ပင်နံပါတ်များသည် DQ နှင့် Vdd ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အာရုံခံကိရိယာနှင့် အာရုံခံကိရိယာထောက်ပံ့မှုမှဖတ်ရှုသည့်ဒေတာကို ပေးဆောင်မည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည် GND ကိုလည်းချိတ်ဆက်ရမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ယေဘုယျ » GND- ဤအတိုကောက်များအကြောင်း သိလိုသမျှ
စက်ရုပ်အင်ဂျင်နီယာ- ဤစည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိလိုသမျှ
အပူခံငါးပိ- အဲဒါက ဘာလဲ၊ အမျိုးအစား၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ...